Ushicilelo lwe-3D, izinto abangakuxeleliyo. Isikhokelo sabaqalayo-Ikkaro
yokuqalisa >> Ukushicilelwa kwe-3D >> ISikhokelo Sabaqalayo sisonke kwi-3D yoShicilelo
le krismesi Bandinike iprinta ye-3D, i-Ender 3. Nangona yayiyinto endandiyifuna ixesha elide, yayimangalisa ngokwenene kwaye andizange ndikhangele ulwazi malunga nantoni na kweli hlabathi labashicileli kunye noshicilelo lwe-3D. Ngoko kwafuneka ndifumane ubomi bam.
Esi sikhokelo kulinge lokunceda bonke abantu abakwimeko efanayo kwaye bafuna ukuqalisa ushicilelo lwe-3D ukusuka ekuqaleni. Apha ndixela amava am.
Hlanganisa kwaye wazi umshicileli wakho
Oko kuvakala ngathi yi-cliché kodwa kufuneka uyazi into ojongene nayo.
Fumana iividiyo kunye nolwazi kwindibano yemodeli yakho. Funda ukuchonga i-axes ezi-3, yeyiphi engu-X, yeyiphi engu-Y kwaye yeyiphi engu-Z kwaye yeyiphi indawo enokuthi iphume kuyo ekuhlengahlengisweni nalapho iya kufuna ukulungiswa.
Ixhomekeke ngokwenene kumshicileli onaye. Ukuba unayo iPrusa, i-Ender okanye i-Anet kuya kufuneka uyihlanganise kuqala, nangona beza kuhlanganiswa kwangaphambili kwaye indibano ilula.
Ulungelelwaniso yeyona nxalenye ibalulekileyo yokulungiselela ukuqalisa ukuprinta.
Ukuba awulungelelanisi kakuhle, iindawo aziyi kuncamathela ebhedini okanye zikhuphe ushicilelo oluphakathi, okanye ukujija okanye iinyawo zendlovu. Ndiza kuthetha ngokubanzi malunga neziphene eziphambili zoshicilelo kunye nendlela yokusombulula ngayo.
Into leyo akukho mntu undixelele ukuba inqanaba lingandinceda kakhulu ukulinganisa umshicileli wam. Noko indincedile kakhulu ukuba ibhedi neX axis zilungile kwaye iziphene ebendizifumana zisuka kwenye indawo. Ndigqibele ndithenga le oyibona emfanekisweni, ukujonga i-X axis, ngakumbi kwi-Ender 3 enentonga enye kuphela ye-axis ye-Z kwaye kulula ukuba ingalingani apho.
Shicilela isiqwenga sovavanyo
Kwimeko yam kunye ne-Ender 3, iziqwenga ezi-3 ziza kuprintwa kumshicileli. Kukho iifayile ezi-3 .gcode ezikwi-microSD. Kwaye oku kuza nenye yeengxaki eziphambili esizifumana xa sisiya kwiindawo zokugcina ezifana neThingivers kwaye sikhuphela iinxalenye esifuna ukuziprinta kwaye ziku-.STL. Umshicileli wethu ufuna i.gcode ukuprinta hayi i.STL
Ngoko ke kufuneka siyiguqule ukusuka kwifomati enye ukuya kwenye kwaye ngenxa yoko sifuna inkqubo. Zibizwa ngokuba yi-Slicer, yizo ezenza iileyile zeqhekeza kwaye zinqume ulungelelwaniso, isantya apho intloko yethu kufuneka ihambe ngayo, ukuphakama okanye ubukhulu boluhlu kunye nezinye izinto ezininzi.
Ilungiselelwe iinxalenye zoyilo uya kufuna uhlobo lweenkqubo ezisekwe kwiCAD, aziwa kakhulu yiFreeCAD kunye neFusion360. Ndiza kubheja kwiFreeCAD kuba kunjalo Software Free.
Ukuvelisa iifayile zomshicileli uzakufuna isilayi. Eyaziwa kakhulu yiCURA evela kwi-Ultimaker.
iziqwenga zam zokuqala
Le yinto wonke umntu endimaziyo endibuza yona. Uprinte ntoni?
Njengokuba. Khange ndiphambe ukuprinta. Ndiqale ngepiece efike neprinter ebesele enayo .gcode ukuba ikhawuleze iprinte. Into embi yeyokuba ibiseyi printing iyure ezi 6 into engandiniki mdla.
Emva koko ndakhuphela kwi-Thingiverse, ezinye ii-bumpers, ezinye izikhuselo, ukuya IArduino UNO. Ngabo bendilinganisa kwaye ndivavanya i-RAFT, i-TRIM, ubude bomaleko kunye nolunye ukhetho lwe-Slicer onokuthi ufunde ngokukhawuleza ukuba luyintoni na ;-)
Eyona nto ndiyiprinte kakhulu kukugcinwa kweencwadi. Bekumnandi kum. Ngoku ndinazo zonke iishelufu zam zeencwadi ezineencwadi ezibekwe ngokuchanekileyo kwaye ngaphandle kokuwa kwimizuzu embalwa.
Kwaye okokugqibela ndiprinte izixhobo ezininzi zokukhupha intlama yamazinyo. Andilazi igama, kodwa usonga intlama yamazinyo ukuze uyikhuphe yonke. Ndikushiyela ifoto.
Ndifuna ngokwenene ukwenza amaqhekeza am. Andifuni ukuba umshicileli akhuphele kwaye aprinte izinto endizifumana zinomdla, kodwa ukwenza iziqwenga zam zesiko. izinto endizidingayo ukulungiswa kwam kunye nezinto zam.
Ngaba wonke umntu?
Uluvo lwam emva kweenyanga ezimbalwa zovavanyo NO. Ayifani nokuthenga umshicileli we-inkjet okanye iprosesa yokutya. Ayisosixhobo esisetyenziswa ngabantu abaninzi okwangoku.
Ndisabona indlela ende kuye wonke umntu oneprinta ye-3D ekhaya, kuba oko kuyimfuneko ukufumana umsebenzisi ukuba enze umsebenzi omncinci, athathe iselfowuni, cofa amaqhosha amabini kwaye aqalise ukuprinta yedwa. Kude kube kuphunyeziwe oko, andiqondi ukuba iya kuba yigajethi kubo bonke abaphulaphuli.
Ezinye izinto ekungekho mntu ukuxelela zona
Ixesha elithathayo ukuprinta inxalenye. Sithetha malunga neeyure phantse nantoni na.
Yintoni ekukuyo Kubonakala kuncinci, kodwa ke kufuneka uyifake kwindawo ethile endlwini kwaye kungekhona wonke umntu onendawo efunekayo. AYIKHO wonke umntu onendawo yokusebenzela, igaraji okanye indlu enkulu. Ngoko cinga malunga nokuba uza kuyibeka phi ngaphambi kokuba uyithenge kwaye ujonge imilinganiselo.
Ingxolo. I-Ender 3 yam ayingxoli kakhulu. Ndivala umnyango weofisi apho ndinayo kwaye ayindikhathazi, kodwa ukuba uceba ukuyibeka kwindawo eqhelekileyo, khumbula ukuba yintoni ingxolo eyenza.
Ivumba. Ukuba uprinta i-PLA, ayisiyonto ininzi kakhulu, ukuba uprinta izinto ze-ABS ziqala ukuntsonkotha, kwaye ukuba usebenzisa umshicileli we-resin, ke umsi unobungozi kwaye kufuneka unikezele igumbi ukuze uprinte.
Ukuba kufuneka ufunde ukusebenzisa iinkqubo ukuyila iziqwenga zakho. Ewe.
Olo yilo luyidemon yombono wakho. Ngoko libala malunga nokuvula iifestile ngelixa ushicilela.
Ukuba uyakudinga uNelly hairspray ngokungathi uneminyaka engama-70 ubudala. I-lacquer ye-Nelly isetyenziswe njengeglue ukwenzela ukuba i-PLA ibambelele kakuhle ebhedini kwaye isebenza kakuhle kakhulu.
Loo mibono inokupheliswa. Ukuba kukho impazamo, okanye uyazisola ngayo, okanye nantoni na, kukho iinketho kumshicileli wokunqumamisa okanye ukurhoxisa ushicilelo. Ewe, kuyavakala xa bekuxelela, kodwa xa bengakuxeleli ngamanye amaxesha awucingi ngako.
Njengoko besenditshilo, ukuyila iziqwenga zakho kuya kufuneka usebenzise isoftware ethile. Kukho yonke into kumntu wonke. Ezi zezona zaziwa kakhulu.
FreeCAD. Isoftware yasimahla nesimahla. I-Open Source iflegi kushicilelo lwe-3D. Ndiqalile ukufunda iFreeCAD
Fusion360. Ihlawulwe kwaye akukho nguqulelo yeLinux. Kukho iilayisensi zasimahla zokuzisebenzisa. Kodwa ndiye ndayilawula
I-SketchUp Simahla. Isetyenziswa kwisikhangeli. Inketho enomdla.
Nangona kunjalo, ndiza kuchaza oku ngokunzulu kwinqaku elahlukileyo.
Njengesoftware yeCAD, kukho izilayi ezimbalwa kwimarike. Ezona zaziwa kakhulu kunye nezo ungaqala ngazo zezi:
UltimateMaker Unyanga. Akukho nto. Ngokunokwenzeka eyona yaziwa kwaye isetyenziswa ngoku. Yile nto ndiqalile ukuyisebenzisa.
Prusa slicer. Isimahla. Omnye ukwazana okukhulu.
Yenza lula i-3D. Ihlawulwe, kodwa ukuba uza kwenza umsebenzi wobuchwephesha inokuba lukhetho kuwe. Owu, kwaye ayisebenzi kwiLinux. yonke into ayilunganga lol
Kusesekuseni ukukuxelela ngeengxaki ezininzi.
Kuye kwafuneka ndijamelane nokulinganisa okubi kunye ne-Warping, ukuba amaqhekeza asuka kwisiseko ngelixa ushicilela. Kodwa ndiyilungisile nge-calibration kunye ne-lacquer.
Kwaye ngoku konke oku emva kweenyanga ezimbini zokuyeka ukusetyenziswa. Nje ukuba ndinamava amaninzi ndiza kukwazisa.
Intlango yamaTatar nguDino Buzzati
Idemokhrasi nguDaniel Innerarity
Uyicima njani yonke imiyalezo evela kumsebenzisi kwi-vBulletin
1 Hlanganisa kwaye wazi umshicileli wakho
2 Ulungelelwaniso lomshicileli
3 Shicilela isiqwenga sovavanyo
4 iziqwenga zam zokuqala
5 Ngaba wonke umntu?
6 Ezinye izinto ekungekho mntu ukuxelela zona
7 isoftware ukuyila
8 Isiqhekeza seSoftware
9 Iingxaki eziqhelekileyo